Physics Demonstrations – Coupon Machine Social Works
Home /Uncategorized / Physics Demonstrations
Source ::::: http://sprott.physics.wisc.edu/demobook/uwpress.htm
“Professor Sprott waa Masterka ee uu ganacsiga iyo waxyoonay run ah kuwa u qabtaan dibad physics oo dhan. Text Tani waa khayraadka la yaab leh, oo ka kooban badan oo macluumaad. Faahfaahsan oo si wanaagsan loo soo abaabulay, tani waa sida ay tahay in la sameeyo.”
Saynisyahanka Mad for Show Caawa la Jay Leno
“Buugani waa in on miiska ee professor kasta physics kulliyad iyo macalin kasta dugsiga sare. Waxay awood doonaa macallimiinta fasalka iyo kuwa bandhigyo sayniska dadweynaha si ay u kordhiyaan waajihid iyo si waxtar leh kor loogu qaado oo farxad u ah waxbarashada.”
University of Wisconsin Madison-
“Waxa uu u ballanqaaday inuu wow dhagaystayaasha oo uu ka badan sameeyey wanaagsan on yabooha in. Waxa uu marka hore u muuqday ka kuraasta ku duubtaa, in tuxedo burgandy iyo cape madow hoose jira. Waayo, ka tago, ayuu ka uumi daruur nin-dhigay. Daamanka hoos, indhaha ballaarisey, iyo timaha oo macno ahaan ka taagnaa dhamaadka sida uu soo saaray cabitaanno iyakana in caayay maamuusaan, kubad levitating, madfac ah nitrogen dareere ah, iyo guluubka fudud aadanaha. ”
“Clint Sprott: waan jeclaaday aad show waan jeclahay physics!.”
hore ee Chancellor of the University of Wisconsin Madison-
iyo Xoghayaha hore ee Adeegyada Caafimaadka iyo Aadanaha
“Ay taageerayaan sababaynta adag iyo waayo-aragnimo ballaaran cilmiga Sprott ee, kitaabkan anigaa dahab ah oo dibad-eegayey, farxad macalimiinta physics.”
author of Flying rogadka ee Physics
farsamooyin yar yihiin sida wax ku ool ah ee guud ahaan danta sida mudaharaadyo riwaayado sayniska. Tani Sourcebook buuxda Illustrated la laba xiran-qormeeyay DVD ee qeexayaa shan iyo siddeetan bannaanbaxyo physics ku haboon qaab oo ka baxsan fasalka labadaba. bannaanbaxyo Kuwani fascinate doonaa oo yaabiyo halka baraya yaabab iyo sayniska wax ku ool ah physics.
Dr. Sprott qaybsada bannaanbaxyo lagu tijaabiyaa sano ee cilmiga ee uu taxane cashar caan ah, “yaabka leh ee Physics.” macalimiinta Science oo heer kasta ka heli doontaa badan oo faahfaahsan oo muujinaysa sida ay u soo bandhigaan bannaanbaxyo si ardayda kartina. xirfadlayaasha Science ka heli doontaa macluumaad lagama maarmaan u ah horumarinta presentatiions waxbarasho ee dadweynaha.
Abaabulan si loo baro lixda meelaha ugu waaweyn ee physics classical – mooshin, kulaylka, dhawaaqa, korontada, magnetism, iyo iftiinka – Mudaaharaadyo Physics ka mid ah:
sharaxaad kooban oo bandhig kasta
liiska alaabta, la ilaha qalabka caadiga ah
wada hadal ah mabaadi’da physics ka muujiyeen
khataraha ammaanka kara
tixraac wixii macluumaad dheeraad ah
bannaanbaxyo Dr. Sprott ayaa racfaan ka qaadan doonto in ay dhageystayaasha guud iyo ardayda dugsiga fasalka si ay u qalin iskuulka. Buugani waa in on shelf ee bare kasta oo doonaya in uu ka dhigo sayniska soo noolaaday ee maskaxda iyo qalbiyada ardayda.